Tặng sách gì cho người yêu? Sách hay & ý nghĩa tặng bạn trai, bạn gái | Anybook.vn - Anybook
Tặng sách gì cho người yêu? Sách hay & ý nghĩa tặng bạn trai, bạn gái | Anybook.vn
1 Inona no boky homena ny olon-tianao? Boky tsara & misy dikany ho an’ny sipa sy sipa
1.1 Inona no boky tokony homeko ny olon-tiako?
1.2 BOKY MANAMPY ANAO MAHAFANTATRA TSARA
1.2.1 01. Manaova toy ny vehivavy, mieritrereta toy ny lehilahy
1.2.2 02. Lehilahy Mars Vehivavy Venus
1.3 RAHA TIAN’NY VAHOAKA ANAO FOTSINY IHANY
1.3.1 03. Havana tia
1.3.2 04. Mitsirika any ivelany any ivelany
1.3.3 05. Manirery ao Everest
1.4 Ny sipa na sipa dia tia romantika
1.4.1 06. Ao anatin’ny oram-panala – Manafina andro lohataona
1.4.2 07. Nofy ao amin’ny fivarotam-boky morisaki
1.5 BOKY NOMENA HO TORITENY HO TENY HITENY – TOROHEVITRA NY FITIAVANA AMIN’NY BOKY
1.5.1 08. Tia sipa aho fa tsy sahy manontany
1.5.2 09. Tiavo Tena Tahaka Anao
1.5.3 10. Tsy manana olon-tiana ve ianao?
1.5.4 Omena BOKY VERSION TERAKA NA SPECIAL NO SAFIDY TSARA
1.5.5 11. Artista sy Margarita
1.5.6 12. 999 Taratasy ho an’ny tenako
1.6 SAFIDY FANOMEZANA HAFA:
Inona no boky homena ny olon-tianao? Boky tsara & misy dikany ho an’ny sipa sy sipa
Inona no boky tokony homeko ny olon-tiako?
Ity angamba no fanontaniana mahaliana ny maro aminareo. Indrindra fa amin’ny fotoanan’ny fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ny olon-tianao, ny fetin’ny mpifankatia, ny 8 martsa … dia te-hanome boky tsara sy misy dikany ny olon-tianao.
Raha ny marina, fanontaniana sarotra izany, satria ny olona tsirairay dia hanana ny tiany sy ny fitiavana mamaky teny. Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mahatakatra izay tian’ny olon-tianao.
Ao amin’ny lahatsoratra anio, ny lisitry ny boky dia te-hampahafantatra anao boky tsara ary midika ho an’ny antsasany hafa. Aza adino ny mitahiry ity lahatsoratra ity rehefa ilaina, satria ny Lisitry ny Boky dia hanavao tsy tapaka sy hanova ny lisitra tsindraindray.
BOKY MANAMPY ANAO MAHAFANTATRA TSARA
Amin’ny fitiavana dia ilaina ny mifankahazo ny eritreritry ny tsirairay. Miaraka amin’ireto boky 2 manaraka ireto dia azo antoka fa ho safidy tsara ho an’ny olon-tianao sy ny famakiana miaraka.
01. Manaova toy ny vehivavy, mieritrereta toy ny lehilahy
Act Like a Lady, Think Like a Man nataon’i Steve Harvey – miaraka amin’ny fanoratana mora amin’ny resaka, voaravaka hatsikana kintana hatsikana, Steve Harvey ao amin’ny Act Like a Lady, Think Like Men dia toy ny namana akaiky kokoa noho ny psikology. Tamin’izany fomba izany dia noraisina tsara tany Etazonia ilay boky tamin’ny famoahana 22 indray tao anatin’ny herintaona latsaka.
Miaraka amin’ny Act Like a Woman, Think Like a Man dia hahita ao an-tsain’ny lehilahy ary hampiseho amin’ny vehivavy ny tetikady vitsivitsy hanalana ireo tsy voafehy. Ity boky ity dia manome fampahalalana betsaka ho an’ny mpamaky momba ny fahasamihafana eo amin’ny lahy sy ny vavy sy ny fomba handresena azy ireo mba hanana fifandraisana tsara ho an’ny roa tonta.
02. Lehilahy Mars Vehivavy Venus
Ny fiovana kely nefa manan-danja dia mety hisy fiantraikany lalina sy maharitra eo amin’ny fifandraisana.
Ny boky Men Mars Women Venus dia tsy miresaka mivantana ny fanamby amin’ny “fifandraisana tsy mety”, fa manolotra fomba fiasa vaovao ho an’ny lahy sy vavy. Rehefa takatra dia mihatsara ho azy ny fifandraisana. Rehefa tsara kokoa ny fiaraha-miasa eo amin’ny olona roa dia hitombo ny fanantenana ary hanjaka ny fitiavana. Miaraka amin’ny fitiavana sy ny fifandraisana tsara, saika ny olana rehetra, na dia ny “olana lehibe” aza dia azo voavaha. Lazao aloha ny olana kely, izay hanjavona tsikelikely na ho voavaha mora foana ny olana lehibe.
Miaraka amin’ny boky Men Mars Women dia nanampy mpamaky an-tapitrisany i Venus ary azo antoka fa hanatsara ny fifandraisanao amin’ny lahy sy vavy.
Azo lazaina fa boky naroson’ny mpamaky maro izy ity mba ho anisan’ny boky sahaza ho an’ny mpifankatia mba hifankahazoana kokoa ny mpivady.
RAHA TIAN’NY VAHOAKA ANAO FOTSINY IHANY
Ho an’ireo izay tia mandeha dia misy safidy vitsivitsy. Ny lisitry ny boky dia te-hanolotra boky 2 tena tsara momba ity karazana ity.
03. Havana tia
Raha tia fitsangatsanganana io olona io, manana sakafo tena tsara, toerana mahafinaritra, dia safidy tsara tokoa ny boky Havana Lover.
Ny Lover Havana dia ny dian’ny vehivavy mirehareha izay nandalo teo ambony sy ambany, nifoha tao anatin’ny halalin’ny fiainana, ary nandositra ny vatany mba hiaina fiainana izay tsy hanenenany any aoriana.
Ny boky dia toy ny fitsangatsanganana hahitana valiny momba ny dikan’ny fiainana ary koa ny lanjan’ny tena amin’ny lalana, dia …
Ny Havana Lover an’i Dinh Hang dia iray amin’ireo boky vitsivitsy izay mamerina ny hakanton’i Kiobà, feno loko, fofona, tsiro, feo, sady mahafatifaty no manjavozavo, tsy misy dikany sy tantaram-pitiavana.
04. Mitsirika any ivelany any ivelany
Araka ny gazety Telegraph, “The Orient glides out of the window” nosoratan’i Paul Theroux ho iray amin’ireo boky fitsangatsanganana roapolo tsara indrindra hatramin’izay. Ny boky dia mirakitra efa-bolana sy tapany miaraka amin’ny lamasinina maherin’ny 30 avy any Londres mankany Afovoany Atsinanana, mamakivaky an’i India, mankany Azia Atsimoatsinanana, mijanona ao Japon ary avy eo miampita an’i Siberia mba hiverina any Eoropa.
Namela fahatsapana mahaliana maro ho azy ny firenena rehetra nandalovany. Thailandy dia mitabataba nefa mitsiriritra, i Japana dia mahazo aina fa henjana loatra, Afghanistan dia mampidi-doza, India dia feno fanatika. Ny zavatra niainan’ny mpanoratra rehetra dia voarakitra an-tsoratra amin’ny fomba tena izy amin’ny asa.
Ny East Glides Out the Window dia sarin’ny Atsinanana feno fihetseham-pon’ny olona te-handeha, te-hahalala, te-hahatakatra. Azo antoka fa boky tsara ho an’ny olon-tianao na ny sipanao izany.
05. Manirery ao Everest
“Ny dian’i Di Li dia mahavariana amin’ny antsipiriany be dia be feno fampahalalana vaovao, izany no mahatonga ny tantara. Di Li dia mitantara tantara iray izay mahasarika, malina ary mibitsibitsika toy ny namana. Amin’ny alalan’ny fomba fizarany vaovao dia tsy fihetseham-po na traikefa manokana intsony ny dia, fa mahatonga ny mpamaky hanatevin-daharana avy hatrany ny mpanoratra amin’ny dia lavitra, hahita ny tany lavitra, zava-baovao ary hihaona amin’ny olona mahaliana. ”
Izany no fanehoan-kevitry ny mpanoratra Dang Thieu Quang momba ny bokin’i Di Li Loneliness on Everest.
Miaraka amin’ny feo mahatsikaiky sy mahasarika, nitondra traikefa sy vaovao mahaliana momba an’i Everest i Di Li, tamin’ny alalan’ireo lalana sy tany manana toetra ara-kolontsaina maro samihafa toa an’i India, Tibet, Nepal, Chengdu (Shina). Ny boky dia mampanantena fa fanomezana lehibe raha tia dia ny olon-tianao na ny sipanao.
Ny sipa na sipa dia tia romantika
Ireo izay tia tantaram-pitiavana, misafidy tantaram-pitiavana, mitondra fiadanana moramora dia mety ho anao hifandray ara-pihetseham-po amin’ny olon-kafa.
06. Ao anatin’ny oram-panala – Manafina andro lohataona
Miafina ao am-pon’ny ranomandry amin’ny andro lohataona ny boky be mpividy indrindra amin’ny karazana fitiavana, mitondra fahatsapana maivana toy ny kaopy dite isa-maraina, milamina, mamerovero, ary avy eo mitodika any amin’ny pejy. Tsarovy fa tohizo ny fandehanana eto amin’ity fiainana ity, ny dingana rehetra dia ara-dalàna ary avy eo dia mitsonika ny lanezy ary mamony ny voninkazo ary ny andro lohataona dia hamirapiratra.
Efa antitra toy ny lanezy ny tantara amin’ny andro ririnina, manjelanjelatra tsara ny ranomandry tsirairay. Fa ny oram-panala dia hiempo ao anatin’ny indray mipi-maso, toy ny zavatra tsara eo amin’ny fiainana mihalevona rehefa mandeha ny fotoana. Toy ny misy fanaintainana mitoetra ao am-po mandrakizay, tsy miala; Misy zavatra taloha izay tsy azo avela mihitsy.
Fantatrao ve anefa fa vao tonga amin’ny andro lohataona dia tsy maintsy miandry ny ranomandry hiempo, mandeha mandrakizay, mandeha mandrakizay, dia vao mamony ny voninkazo…
07. Nofy ao amin’ny fivarotam-boky morisaki
Momba an’i Takako – tovovavy voafitaky ny olon-tiany ilay boky. Nanapa-kevitra ny hiala amin’ny asa ary latsaka ao anatin’ny andro maromaro matory tsy tapaka mba hanafenana ny alahelo. Avy eo, nisy antso an-telefaona avy amin’ny dadatoany niteraka azy, izay tsy hitany nandritra ny 10 taona, nanaitra azy tamin’ny nofiny. Takako dia manaiky ny hitandrina ny fivarotam-boky mandritra ny antsasak’adiny mba hampifaliana ny reniny. Saingy tsy azo eritreretina, niandry azy ny fivarotam-boky Morisaki tranainy iray misy tontolo misy boky an’arivony mirakitra ny fotoana sy ny tantara. Nanasitrana ny ratra tao am-pony ny boky.
Ary mihoatra noho izany dia mahita zava-baovao sy mahaliana maro izay mbola tsy fantany hatrizay i Takako. Maivana sy lalina ny tantara, izay azo antoka fa ho fanomezana lehibe ho anao ho an’io olona io.
Na dia efa ela aza no nampidirina tamin’ny mpamaky vietnamiana hafa, hatramin’izao, ny boky Dreams at Morisaki Bookstore dia nahazo saina be avy amin’ny mpamaky ary ao anatin’ny lisitry ny bestseller foana. List Books dia mino fa fanomezana lehibe ho an’ny olon-tianao ihany koa izany.
BOKY NOMENA HO TORITENY HO TENY HITENY – TOROHEVITRA NY FITIAVANA AMIN’NY BOKY
Raha tianao ny olona iray, nefa tsy mahay mibaboka, maninona raha omeo anao ny bokinao misy lohateny?
08. Tia sipa aho fa tsy sahy manontany
Azo lazaina fa anisan’ny boky tsara indrindra hanampiana ny ankizilahy hibaboka amin’ilay tovovavy tiany io. Ny lohatenin’ny boky manana fahafahana “manafika” ny fony mivantana tahaka Sipa no tiako fa tsy sahy manontany azo antoka fa safidy tsara.
Tantaran’ny tanora momba ny andro andavanandro miaraka amin’ny tsiro mamy sy marikivy ampy ilay boky, misy fihovitrovitra mivadibadika eo amin’i Yamaguchi sy i Sato namany mipetraka eo akaikiny.
Tsy tia an’i Sato ilay mpianatra tsy voafehy Yamaguchi – tovovavy tsotra, miadana, kivy izay tsy tsara tarehy mihitsy. Nandritra ny andro tena milamina tany amin’ny sekoly ambaratonga faharoa, na dia tsy te hanaiky izany aza izy, dia nahasarika tsikelikely an’i Sato namany nipetraka teo akaikiny i Yamaguchi. Indray andro, tamin’ny fehezanteny iray avy amin’i Sato rehefa nanavy sy torana izy, dia nandroso haingana ny fifandraisan’izy roa…
09. Tiavo Tena Tahaka Anao
Mpamaky maro no mahafantatra an’i Van Tinh ho mpanjakavavin’ny boky manainga fanahy ho an’ny vehivavy. Ary ity fiverenana ity dia nitondra loko vaovao sy manintona tanteraka.
Tena tiako, ianao no mitondra ahy nofinofy tanora sady mamy no somary mangidy, amin’ny foko rehetra ary misy nenina kely. Ny boky dia miresaka momba an’i Lam Lac Lac velombelona sy mahatehotia, izay tia vola tahaka ny fiainany, ny fepetra hifidianana olon-tiany dia: lahy iray, roa velona. Saingy hatramin’ny nihaonany tamin’ilay andriamanitra lahy Shen Lam Phong, fantatr’i Lac Lac fa efa ela no nihozongozona ny fenitra. Nihena ho Lam Phong ny tontolony manontolo. Tsy mora anefa ny mandresy an’io nofinofy io, efa im-betsaka no voadona ny fo marefo…
10. Tsy manana olon-tiana ve ianao?
Raha ankizivavy tia lehilahy ianao, dia ampiasao ilay boky hoe Tsy Mpifankatia ve ianao? mibaboka ny fitiavanao izao.
Toy izany ny fitiavana tanora, misy ny teny tsy mety, fa misy ny fifandraisana tsy mety satria matahotra ny hiteny izany.
Ity dia tantara momba ny fitiavan’ny “sifotra” Tran Khinh ho an’ny manam-pahaizana momba ny fitsaboana Ha Dong Gia. Ny tantaram-pitiavan’i Tran Khinh dia azo fintinina amin’ny filazana hoe: “Ny hafainganam-pandeha haingana indrindra amin’ny mandady sifotra dia 8,5m/ora, saingy tsapan’i Tran Khinh fa miadana kokoa noho ny an’ny sifotra ny fikatsahany an’i Ha Dong Gia.” .
Omena BOKY VERSION TERAKA NA SPECIAL NO SAFIDY TSARA
Raha tsapanao fa ambany dia ambany ny lanjan’ny boky, manahy ny amin’ny fanomezana azy ho fanomezana, dia safidy tonga lafatra ny fanomezana boky fanontana voafetra ho toy ny fanontana azo angonina na manokana.
11. Artista sy Margarita
Ny asa “Artisan and Margarita” nosoratan’ny mpanoratra Rosiana Mikhail Bulgakov dia navoaka voalohany tany Vietnam tamin’ny 1989, tamin’ny alàlan’ny fandikana nataon’ny mpandika teny Doan Tu Huyen. Ity no asa malaza indrindra nataon’i Bulgakov, ka nahatonga ny anarany ho isan’ireo mpanoratra lehibe indrindra eran-tany. Ho an’ny mpandika teny Doan Tu Huyen, ny fandikana vietnamiana ny boky “Artisan sy Margarita” no “asa fandikan-teny lehibe indrindra, be pitsiny indrindra ary mahafinaritra indrindra” amin’ny asany. Hatramin’izao dia mbola asa soratra ihany izy ity – asa fandikan-teny tian’ny mpamaky vietnamiana maro.
Dika mitovy 1200 ihany – Artisan sy Margarita misy dikan-teny 2: Mampanantena ny Negative sy Positive fa fanomezana sarobidy sy manan-danja indrindra ho an’ny olon-tianao.
12. 999 Taratasy ho an’ny tenako
Azo antoka fa maro ny mpamaky no tsy vahiny amin’ilay boky nitondra ny anaran’ilay mpanoratra Mieu Cong Tu. Ity boky ity koa dia mpivarotra ambony indrindra nandritra ny taona maro. Izany no antony tena hevitra tsara ny hanomezana an’io olona io ny edisiona premium sy manokana.
Azonao atao ny mahita fampidirana amin’ny antsipiriany amin’ity boky nozarain’ny Lisitry ny Boky teo aloha ity: 999 Taratasy ho an’ny tenako
SAFIDY FANOMEZANA HAFA:
Raha mbola tsy afaka mandray fanapahan-kevitra ianao dia maninona raha mijery ny lahatsoratra 2 etsy ambany mba hamaliana ny fanontaniana Inona no boky tokony homeko ny olon-tiako? (sipa, sipa sa olon-tiana)?
Antenaina fa miaraka amin’ireo boky etsy ambony ireo dia nahita valiny amin’ireo fanontaniana toy ny hoe “inona no boky tokony homeko ny olon-tiako?” “Tokony hanome boky ho an’ny olon-tiako ve aho?”. Raha tsy manana ny valiny ianao dia aza manahy, tehirizo ity lahatsoratra ity, satria ny lisitry ny boky dia havaozina miaraka amin’ny boky tsara maro hafa tsy ho ela.
– Lisitry ny Boky ankapobeny
READ Sách Luật Hấp Dẫn Bí Mật Tối Cao | Anybook.vn
Previous: Airbnb Là Gì? Mô Hình Kinh Doanh Airbnb Tại Việt Nam | Anybook.vn
Next: Công việc trưởng phòng mua hàng | Anybook.vn